Umhla My Pet » 5 Iinkolelo Ukuthandana ukuba wonke umntu ecinga ukuba okwenyaniso
ukubuyekezwa: Jun. 30 2020 | 3 min ukufunda
Ukusuka sitcoms ukuze kubonakale uthando amabali kubahlobo, Siyazi sonke ezinye iinyaniso jikelele-wavuma ngokuthandana. nokuba, njengako kwinzululwazi uninzi lwezi “iinyaniso” azilunganga. Ngoko okunene ngaphantsi malunga romance kunokuba ubucinga ntoni wena, kude kube ngoku.
intsomi #1: Gamers banyulu ulilolo.
esebenzisa Hollywood, sonke siyazi ukuba “nokungabohlwayi ungamlahli ongazange wayiphatha boob” ingcinga. nangakumbi ukuze, xa sisiva nokungabohlwayi ilizwi, sidla ukucinga indoda zibhitye kakhulu okanye amanqatha ogama romance ibandakanya Xbox registrationError owenziwayo elingaphantsi umzali wabo. Ngokutsho kwinzululwazi, ezi Gamers ungamlahli kungenzeka ukuba aphume ngemihla kunokuba non-gamers. kunye, kunye nokukhula udlala kwimarike ukongeza ukunyuka imidlalo baninzi, midlalo loyiswa abe ice ungumgqithi ethandwayo. ngokunjalo, ke akunakumlibala imidlalo intanethi apho abantu badibana kwaye ndibathandile.
intsomi #2: ukuthandana Intanethi kuphela njengecebo lokugqibela kodwa itsala abo boyisiweyo kuphela.
ngelishwa, ngenxa yeenzame zorhwebo lithemba ukongeza kwiprofayile abangenanyaniso, ukuthandana intanethi Ndizuze rap embi iminyaka. Ngokuqhelekileyo, ezingqondweni zethu loo nto Kweza njengoko iinzame emhadini lokugqibela nokufumana iqabane umphefumlo wakho; nokuba, kwezi mbono ziphosakele. Kukho zophando lwakutshanje ezibonise ukuba abasebenzisi site ukuthandana omnye kwabahlanu ukufumana ubambo intanethi. ngokunjalo, 94% abantu ukwenza ubudlelwane intanethi kuya kuphuma ngomhla wesibini, leyo ngaphezulu indlela yepesenti yabantu abazanelisayo kweintanethi. Kutheni le nto? Ngenxa yokuba ukuthandana Intanethi ngokusebenzisa ikhompyutha, abantu bakholisa ukuba ukunyaniseka ungekaqali ngakumbi njengoko “ethetha kwikhompyutha”. Ycinge, ubuya ayichitheki Guts yakho umntu odibene kanye ebharini? Esinye isizathu kakhulu ukuba umhla online kukuba ukuzeyisa ephilayo yaye kuya kusanda ukuthandwa. Amathuba okokuba uya kudibana nomntu onomdla efanayo iphezulu kakhulu.
intsomi #3: xa siqhubana, abafazi ngokweemvakalelo amadoda uyondelelane.
Siye yonke ndiyibonile iimovie ezingabalekiyo kwaye ibonisa ukuba akhawunti abafazi caphukisayo ukuba iinyembezi phezu umfana okanye hlalutywa ukuzalana gama indoda ibonakala singananzanga kwaye nangoovumazonke xa usoloko ngokuphumelela intliziyo yomfazi. Science uthi amadoda achatshazelwa ngokweemvakalelo ngolwalamano umdlalo angaphezulu kunawabasetyhini, bona nje musani unokuyixela. Abafazi badla nabanobuntu olusondeleyo nosapho kunye nabahlobo ukuvumela kakhulu inkxaso ngokweemvakalelo ingakumbi xa kuziwa engxakini mfo. Guys badla igila nje namaqabane abo ekwenzeni balulwele ingakumbi nzima phezu kwabo.
intsomi #4: Ufikelelo ubulala romance.
Kunye Ukufana ukuba feminists ngabafazi abazimeleyo akufuneki ubudlelwane okanye umntu ukugqibezela kubo ezidibene ezizukulwaneni ezininzi, nguwe kanye engalunganga. Abafazi abazigqala feminists kaninzi ngaphezu kungekhona kubudlelwane zingafaniyo. Amadoda etshate ababhinqileyo baxele ukuba ubomi babo ngesondo eyanelisa ngaphezu abo bangengabo. Ngoko ke ngexa feminists bakutshelwe kubonwa yeflaneli, abafazi mannish ukuba ngenene asingomzekelo.
intsomi #5: Izibini abahlala kunye bengekatshati balungiselelwe ngcono.
Society owemkayo kwinto yokuba isibini akatshatanga ukufumana indawo kunye uphila ezonweni. Kodwa kule mihla ke phantse iyavakala. Kubonakala kusengqiqweni kuhlala nabanye yakho ebalulekileyo phambi kokwenza ukuzibophelela elisemthethweni Unokuphela iyaqhawuka. Le ndlela, uyakwazi ukufumana ukuba uMnu. Ilungelo ngokwenene uMnu. Kunene. Ngokutsho kwinzululwazi, izibini abaye bahlala ndawonye ngaphambi komtshato okanye yothethathethwano eliphezulu izinga umtshato nolwaneliseko emtshatweni. Izibini badlala indlu phambi zothethathethwano ingakumbi ayithethi ukuba loo nto ukuvavanya ulwalamano lwabo. Ukuba uziva ngathi uvavanyo iqabane lakho uze amathuba wena hayi omnye ekunene. Enye into kungena umdlalo ingcamango endazalelwa. izibini, kule mihla, ukunyanga ukuhlala ndawonye elinye inyathelo kwinkqubo ukuthandana. Xa beqalisa abahlala kunye, zikufumana phantse akunakwenzeka ukuba ayichithe nangokwasezimalini nangokweemvakalelo ke uyihlawule.
Kwaye kukho unayo, Ngoku uyazi ngakumbi romance.
10 Izizathu Kutheni Cats njengabongamileyo kwisithandwa